Speed up Adobe Acrobat(Pdf) [Tips & Tricks]
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Hardware Knowledge » Speed up Adobe Acrobat(Pdf) [Tips & Tricks]
1 Speed up Adobe Acrobat(Pdf) [Tips & Tricks] on 30th April 2010, 9:32 am
Adobe Acrobat ကို notepad လိုအမြန်ဖွင့်မယ်.
အင်္ဂလိပ်ဆိုဒ်တခုကနေတွေ့လိုက်လို့ ချက်ချင်းနောက်ကျတယ်.မရှိအောင် ဝေမျှပေးလိုက်တယ်..ဒီဟာလေးကလေး တကယ်အရေးကြီးပါတယ်.ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အခုစာတော်တော်များများက PDF နဲ့ရေးပြီးထုတ်တာများတယ်.ဘာဖြစ်လို PDF နဲ့ဘဲထုတ်လဲဆိုတော့ မြန်မာလိုရေးထားတာတို့ကို ဖောင့်မပြောင်းသွားအောင်ပြီးတော့..ဓာတ်ပုံတွေကိုလဲ PDF နဲ့ စာအုပ်လိုစုလုပ်လိုက်တော့ ပေါ့ပါးပြီး..အဆင်ပြေသွားတာရင် ပြီးတော့ PDF ကို Ebook ဆိုပြီးနာမည်တပ်ထားတော့ Ebook လုပ်တယ်.ဆိုပြီး
နာမည်ကြီးအောင်ရင် စတဲ့ အားသာချက်တွေကြောင့် PDF ကိုအသုံးများကြပါတယ်.ဒါပေမဲ့ ဒီ PDF ကိုဖွင့်တဲ့နေရာမှာ တော်တော်လေးပြသနာတက်ပါတယ်.တခါတလေ..ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ရင် ကွန်ပျုတာ ဟန်းသွားမျိုး..၊ မနိုင်တော့ဘဲ..ကြောင်သွားများ၊ပြီးတော့ အချိန်အကြာနေမှပေါ်လာတာမျိုးစတဲ့ ပြသနာတွေကြုံရတော့...ဒီပိုစ့်လေးက အထောက်အကူပြုသွားအောင်ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်...
Step 1: Install လုပ်ထားတဲ့နေရာ C:\_Program Files\_Adobe\_Acrobat 6.0\_Acrobat ဒီအထိကိုဝင်လိုက်ပါ
Step2: ရောက်ပြီးဆိုရင် plug_ins Folder ကိုဖွင့်ပြီး..ရှိသမျှ File အားလုံးကို Cut(ctrl+x)လုပ်လိုက်ပါ.
Note: cut လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်. Copy ဘဲလုပ်လို့မရပါ.
Step3:ပြီးရင် back ကိုပြန်သွားပြီး Cut လုပ်ထားတဲ့ File ကို Optional ဆိုပြီး Folder ကိုဖွင့်ပြီး
Cut ထားတဲ့ File တွေကို Paste(Ctrl+V) လုပ်လိုပါ..
Step4: အခု Desktop ပေါ်က Adobe Acrobat ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ..အရင်ကထက်နှစ်ဆ၊သုံးဆ..ဒီလိုမျိုးမြန်ဆန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်..
Note:အထက်ပါအတိုင်းပြုလုပ်နေစဉ် Adobe Acrobat ကိုပိတ်ထားပါ.ပြီးမှအသုံးပြုပါ.
2 Re: Speed up Adobe Acrobat(Pdf) [Tips & Tricks] on 30th April 2010, 8:31 pm
Thumbs UP!!!! [You must be registered and logged in to see this image.] I noted it down.
Thanks so much, So la ko KO ~~~